Myanmar I-Film Fest... (မြန်မာနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်): Mind Your Language (အင်္ဂလန်)
Mind Your Language (အင်္ဂလန်)
၁၉၇၇ ကနေ ၁၉၇၉ နဲ့၁၉၈၆ တွေမှာ လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ ဟာသဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါ တယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရောက် နိုင်ငံခြားသားတွေ adult school မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစ ကားသင်တဲ့အကြောင်းပါ။ လူအကြိုက်အများဆုံး clip တွေကိုရွေးပြီးတင်ထားပါတယ်။
အမျိုးအစား - ဟာသ
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရန် - ဒီမှာနှိပ်ပါ
I can't stop watching it. That Indian Dude is more funny. He talk was like used alot of "to be v-ing". I watched it more than3times already and I wonder if there are more of it. Really appreciate if you upload more.